तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि तपाईंको आत्म-छवि बढावा - व्यक्तिगत विकास क्याफे
तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि तपाईंको आत्म-छवि बढावा
पोस्ट हैरी | जुलाई 21, 2018 | सकारात्मक सोच, आत्म-सुधार |0|
धेरै मानिसहरु आफ्नो जीवन मा आत्म-शंका को अवधि को माध्यम बाट। यो यति सामान्य छ, तर यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। तर तपाईंको आत्म-छवि बढावा र एक सकारात्मक मानसिकता अपनाएर, तपाईं वास्तवमै आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ एक सकारात्मक आत्म-छवि राखेर तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धेरै। तपाईंको आत्मविश्वास बढ्नेछ जसको मतलब हो कि तपाईं अधिक परिस्थितिहरूसँग सकारात्मक व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तिहरूले तपाईंको बढाएको आत्म-छविलाई सकारात्मक रूपमा पनि प्रतिक्रिया गर्नेछन्।
तपाईंको आत्म-छवि बढावा गर्न पहिलो चरण
तपाईंको आत्म-छवि बढाउने पहिलो चरण आफैलाई चिन्नु हो। तपाईंले आफ्नो क्षमता र कौशल बुझ्नु आवश्यक छ।
तपाईं सुधार गर्न कमजोरीहरू पनि निर्धारण गर्न चाहनुहुन्छ। तर यी पहिचान गर्दा आफूलाई धेरै पिट्ने नगर्नुहोस्। कमजोरीहरू सजिलै सामर्थ्यमा परिणत गर्न सकिन्छ यदि तपाईं उनीहरूमा लामो समय सम्म काम गर्नुभयो भने।
परिवर्तन गर्नुहोस् र त्यसमा केन्द्रित गर्न तपाईंको बारेमा कुन पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् भनेर निर्धारण गर्नुहोस्। त्यहाँ पक्षहरू हुन सक्छन् जुन तपाईं चिन्तित हुनुहुन्न र तपाईंको स्वयं-छविमा धेरै असर गर्दैन। ती बेवास्ता गर्नुहोस्।
तपाईं आफैँको हरेक पक्ष परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न र गर्नु हुँदैन। कहिलेकाँही तपाईले आफ्नो व्यक्तित्वका ती पक्षहरूलाई मात्र स्वीकार्नुपर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्दछ।
तपाईले कार्य गर्न चाहानुभएको क्षेत्रहरू पहिचान गरेपछि - यो गर्नुहोस्! यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि तपाईंलाई सकारात्मक सोचको साथ मद्दत चाहिन्छ भने, यसमा पढ्नुहोस्। तपाईं ईबुकहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाईन पाठ्यक्रमहरू लिन सक्नुहुन्छ वा अडियोहरू सुन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको आत्म-छवि बढावा दिंदा अंगालो परिवर्तन आवश्यक छ
तपाईं परिवर्तन गर्न इच्छुक हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईं आफ्नो बारेमा राम्रो महसुस गर्नुहुन्न भने, तपाईंले त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ त्यो बदल्नु पर्छ। परिवर्तन कहिले पनि सजिलो हुँदैन, तर जब यो तपाईंको आत्म-छवि बढाउनको लागि आउँछ, तपाईं देख्नुहुनेछ कि यो प्रयासको लायक छ।
यदि तपाईं आफैंले यो कार्य गरिरहनु भएको भए तपाईं मद्दत गर्न छवि सल्लाहकार खोज्न सक्नुहुन्छ। एक छवि सल्लाहकार मानिसहरूलाई तिनीहरूको आत्म-छवि वृद्धि गर्न मद्दत गर्न प्रशिक्षण दिइएको छ।
परामर्शदाताले के सल्लाह दिन्छ भनेर सुन्न यो नम्र हुन सक्छ तर यो प्रक्रियाको अंश हो, र तपाईंले यसलाई अँगाल्नु पर्छ। सभ्य सल्लाहकारका लागि केही पैसा खर्च गर्न नडराउनुहोस्। उनीहरूले प्रदान गरेको नतीजा आफैं भुक्तान हुनेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि कुनै किसिमको मद्दत तपाईं कस्तो प्रकारको मद्दत प्राप्त गर्न, यो हो आफ्नो यात्रा वा परिवर्तन। अरूले के विश्वास गर्छन् भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् र आफैंलाई अरू मानिससँग तुलना गर्न रोक्नुहोस्।
तिनीहरूले तपाईंको जीवन बिताउनु पर्दैन। तपाईं एक हुनुहुन्छ जुन तपाईंको नयाँ छविको परिणामहरूसँगै बाँच्न छ, राम्रो र नराम्रो। जे होस्, सम्भव भएमा मात्र राम्रोमा जोड दिने प्रयास गर्नुहोस्।
जब तपाईं तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस र एक सकारात्मक दृष्टिकोण छ, तपाईं घर र काम मा राम्रो सम्बन्ध हुनेछ। वास्तवमा तपाईको आत्म-छवि सुधार हुने क्रममा तपाईको जीवनको प्रत्येक पक्षले अनुसरण गर्ने छ।
कार्यहरू आंशिक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् किनकि मानिसहरू ती कार्यहरू गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्न पिच गर्न बढी इच्छुक हुनेछन्। उनीहरूले तपाईंको सकारात्मक उर्जालाई भ्याउँदछन् र तपाईंको वरिपरि प्राय: रहन चाहन्छन्। यसले तपाईका लागि अवसरहरू खोल्न सक्छ जुन तपाईंले सोच्नु भएन कि तपाईंसँग आफ्नो क्षमतामा हुने छ।
पछिल्लो१ self मिनेटमा तपाईको आत्मविश्वास कसरी सुधार गर्ने
अर्कोनि: शुल्क टीम निर्माण गतिविधिहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
सकारात्मक रहनुहोस् - Easy सजिलो तरीका तपाईको दिमाग व्यायाम गर्नुहोस्
Big ठूला कुराहरू जुन तपाईलाई आफ्नो चुचुरोमा पुग्नबाट रोक्छन्
11 सक्छ, 2020
गरीब स्वयं छवि? आफ्नो विश्वासलाई चुनौती दिनुहोस्, आफैलाई होइन
यदि तपाईंलाई केहि मनपर्दैन भने, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने, आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुहोस्!
- माया एन्जेलो